I-Xiaomi Mi 9 SE: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
UXiaomi uhambisa uluhlu olupheleleyo lweMi 9s kuthi kulo msitho e China. Ukongeza ekuboniseni iMi 9 yayo entshaI-brand isishiya nezinye izixhobo. Enye yazo yile Xiaomi Mi 9 SE, Ukulandela ukuvuka kuluhlu lwonyaka ophelileyo. Yifowuni efikelela kwinqanaba eliphakathi. Kuyafana kuyilo, kodwa ngokuthe gca ngokuthe kratya.
IXiaomi Mi 9 SE nayo ifika nayo Iikhamera ezintathu zangasemva kunye nesenzwa yeminwe edityaniswe kwiscreen sayo. Nangona ukucaciswa kwayo ngokubanzi kuyinotshi engezantsi kwale modeli yangaphambili. Kodwa olu luhlu lwephakathi lweprimiyamu luboniswa njenge-smartphone enomdla kakhulu.
Ke ngoko, iphehlelelwe koku Icandelo lentengiso elinokukhula okukhulu kwi-2018. Inika iinkcukacha ezilungileyo ngokubanzi kunye noyilo olufana noko sikubonile kwiMi 9. Ke ithiwe thaca njengenketho efanelekileyo kubasebenzisi abanohlahlo-lwabiwo mali olusezantsi.
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi 9 SE
2 IXiaomi Mi 9 SE: Ukubheja kweXiaomi kudidi oluphakathi lweprimiyamu
Ukucaciswa kweXiaomi Mi 9 SE
Le Xiaomi Mi 9 SE iyothusa ngokuba yeyokuqala kwintengiso yokwenza I-Snapdragon 712 njengeprosesa yayo. Ukusukela kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo yaziswa ngokusemthethweni. Ke uphawu lwaseTshayina lukhawuleze malunga noku. Iinkcukacha ezipheleleyo zefowuni zi:
Ukucaciswa kobuchwephesha Xiaomi Mi 9 SE
Umzekelo Mi 9 SE
Isikrini I-5.97-intshi ye-Super AMOLED enesisombululo esipheleleyo se-HD + kunye ne-19: 9 ratio
Inkqubo Qualcomm Snapdragon 712
Ukugcinwa kwangaphakathi 64 / 128 GB
Ikhamera esemva I-48 + 8 + 13 MP ene-f / 1.8 kunye ne-f / 1.2 PDAF kunye ne-LED Flash
Ezinye izinto Inzwa yeminwe eyakhiwe kwiscreen seNFC yokuvula ubuso
Ibhetri I-3.070 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
U bunzima I-155 gram
Le Xiaomi Mi 9 SE ifika noyilo olufana nolomntakwabo omdala. Nangona kule meko iyimodeli encinci encinci ngokobungakanani. Iscreen esincinci, ukongeza kubunzima obuphantsi kunesiphelo esiphakamileyo. Kule meko, siyabona ukuba iscreen sikwasona uninzi lwangaphambili lwefowuni. Ukongeza ekubeni nenotshi ngohlobo lwethontsi lamanzi kwiscreen.
Inzwa yeminwe yeminwe nayo idityaniswe kwiscreen. Ke amarhe okuba uphawu lwaseTshayina lucebise ukulwazisa kwi bonisa kuluhlu oluphakathi. Ngaphakathi kwifowuni sifumana umahluko. Zombini iprosesa kunye ne-RAM kunye nokudityaniswa kokugcina kwahlukile. Ngelixa le Xiaomi Mi 9 SE ifika nge-6 GB ye-RAM. Kwakhona, nge-Snapdragon 712 kulindeleke ukusebenza kakuhle kwefowuni.
IXiaomi Mi 9 SE: Ukubheja kweXiaomi kudidi oluphakathi lweprimiyamu
Icandelo lokufota yinto uphawu olwalufuna ukuyigxininisa kolu luhlu. Njengomntakwabo omdala, le Xiaomi Mi 9 SE ifika nekhamera ngasemva kathathu. Yabelana ngezinto eziqhelekileyo kunye nekhamera ephezulu. Kuba sine-586-megapixel Sony IMX48 isivamvo sikhatshwa yintsimbi yesibini ye-8-megapixel kunye ne-13-megapixel sensor. Ke ithembisa ukunika ulonwabo oluninzi kule ndawo.
Ngokwendalo, ubukrelekrele bokufakelwa buvela kwisixhobo. Kule meko ukuphucula iikhamera kunye nokusinika iindlela ezongezelelweyo zeefoto kuzo. Ngelixa iifayile ze Ikhamera yangaphambili yefowuni iza ne-20 MP sensor enye. Kuyo sinokuvula kobuso ngokunjalo.
Njengomnye umzekelo, iXiaomi Mi 9 SE iza ngoku ngePie ye-Android, Kunye ne-MIUI 10 njengoluhlu lokwenza ngokwezifiso. Kwimeko yakho, ibhetri ngumthamo we-3.070 mAh. Inokutshaja ngokukhawuleza kule meko. Akukhange kuchazwe ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukubiza umnxeba ngayo.
Njengakwimeko ye-Mi 9, okwangoku Sinexabiso lokuba le Xiaomi Mi 9 SE izakuba nayo e China. Kodwa ubuncinci banokuba luncedo kuthi xa kuziwa ekwazini ngakumbi ngesi sixhobo ngokwamaxabiso. Nangona siza kuba nedatha ethe kratya kumaxabiso aso kunye nokwazisa eYurophu ngeCawa kwi-MWC 2019.
Sifumana iinguqulelo ezimbini zolu luhlu oluphakathi kuluhlu lophawu lwentengiso. Zombini zine-6 ​​GB ye-RAM, nangona ukugcinwa kwahlukile ngokuxhomekeka kuguqulelo lwazo. Ezi ziinguqulelo kunye namaxabiso eXiaomi Mi 9 SE e China:
Imodeli ene-6/64 GB inexabiso kwi-1.999 yuan (262 euros kutshintsho)
Inguqulelo yefowuni ene-6/128 GB iza nexabiso le-2.299 yuan (malunga ne-302 euro ukuyitshintsha)
Nangona ngeCawa siza kushiya amathandabuzo ngamaxabiso abo eYurophu. Kodwa njengesiqhelo, sinokuyilindela loo nto amaxabiso aya kuba phezulu kwabo kufuneka beguqukile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » I-Xiaomi Mi 9 SE: I-premium entsha ye-brand mid-range